China Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na-ehicha ma na-akpọkọta ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | JUMP
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ihicha na mbukota dum akara
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na-ehicha ma na-ekpokọta ahịhịa niile: mkpụrụ osisi ọhụrụ na vegeetabels, dị ka tomato, chili, yabasị, mangoes, painiapulu, guavas, unere,
Ngwaahịa ikpeazụ: mkpụrụ osisi a mịrị amị, nke a mịrị amị, ntụ ntụ akpọrọ, ntụ oyi akpọrọ, paịlị akpọrọ akpọrọ, ntụ ọka galiki, mmanụ a mịrị amị, mango, pineapples, guavas, bananas
A na-akpọ usoro nhazi nke mkpụrụ osisi akpọnwụ akpọnwụ. Akpachapu mmiri Artificial na-eji isi iyi nke mmiri, ikuku na ikuku na-ekpo ọkụ dị ka ihe na-enyefe okpomọkụ. N'okpuru na-achịkwa ọnọdụ, okpomọkụ nyefe ọkara na-nọgidere wepụrụ mezue ihicha usoro, mgbe eke ihicha dịghị mkpa iji wepụ okpomọkụ nyefe usoro aka.
Ihe mkpocha mkpụrụ osisi nwere ihe anọ: characteristics njirimara mkpụrụ osisi. Dịka ọmụmaatụ, ọsọ ihicha na-adị nwayọ ma ọ bụrụ na ụdị ahụ siri ike ma ọ bụ wax dị egwu, na ọsọ nke nnukwu shuga na-adịghị ngwa ngwa. ② Usoro ọgwụgwọ. Ka ihe atụ, size, udi na alkali ọgwụgwọ nke ịkpụ iberibe, kwesịrị ọnwụ na alkali tetara ọgwụgwọ nwere ike dịkwuo ihicha ọsọ. Njirimara nke ikpo ọkụ. Dịka ọmụmaatụ, ọsọ ọsọ na-agba ọsọ ngwa ngwa mgbe ọnụọgụ dị elu, ọnọdụ okpomọkụ dị elu na iru mmiri ahụ dị ala; A-④ Njirimara nke ihicha akụrụngwa nwere dị iche iche utịp, na loading ikike nke gwongworo ma ọ bụ ebu belt bụ inversely proportional nke ihicha ọsọ.
Post ọgwụgwọ ihicha
Mgbe ihicha, ngwaahịa họrọ, graded na packaged. Mkpụrụ osisi a mịrị amị nke kwesịrị ịmịcha mmiri (nke a makwaara dị ka ọsụsọ) nwere ike ịchekwa n'ime igbe mechiri emechi ma ọ bụ n'ụlọ nkwakọba ihe ruo oge ụfọdụ, nke mere na mmiri ahụ dị n'ime mgbochi mkpụrụ osisi ahụ na mmiri dị n'etiti mkpụrụ osisi dị iche iche (ọka) nwere ike ịgbasa na kesaa iji nweta otu.
Ọ ka mma ịchekwa mkpụrụ osisi a mịrị amị na obere okpomọkụ (0-5 ℃) na obere iru mmiri (50-60%). N'otu oge ahụ, a ga-akwụ ụgwọ maka nchebe site na ọkụ, oxygen na ụmụ ahụhụ.
Nke gara aga: Igwe nri mkpọ na akụrụngwa mmepụta Jam
Osote: Obere yogot akụrụngwa